haroomaayaa2017 – Bilisummaa
Previous Sagantaa Waaree Aartii Yunivarsitii Haramaayaa, Barattoota mooraatiin haala kanaan gaggeeffame.
www.modernghana.com/ The Amhara people of Ethiopia built the Abyssinian Empire with firearms from Italy in …
Adurrefi hantutatu cidha waliin qopheeffatan. Bakka tokkotti waliin sirbuufis waliigalan. Hantutni gamna waan taateef deemis adurree waan galeef bakka adurreen wal beelamanitti boolla hedduminaan qotattee afaan boolla gubbaa teessee eegde. Adurrenis afaan mi’eefacha gamaan as baatee sirbaa. Hatutnis akkas jette jedhma “of eeggachaa, ilallachaa” sirbaa jette jedhama.